Dzidzo Ndiyo Mhinduro Here? | Martech Zone
Mugovera, March 8, 2008 Mugovera, October 20, 2018 Douglas Karr
Ndakabvunza mubvunzo pa Bvunza Vanhu mazana mashanu iyo yakagamuchira mhinduro inonakidza. Mubvunzo wangu waive:
Iwo makoreji ingori nzira dzakarongeka dzekupfuudza kusaziva kubva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chinotevera?
Kutanga, rega nditsanangure kuti ini ndakanyora mubvunzo kuti unyatsomutsa mhinduro - inonzi link-baiting uye zvakashanda. Mimwe mhinduro yandakatambira yaive isina hunhu, asi kuvhota kwese ndiko kwakakanganisa.
Parizvino, 42% yevavhoti vakati hongu!
Kuti ndakabvunza mubvunzo hazvireve kuti ndiwo maonero angu - asi zvinondinetsa. Parizvino, zviitiko zvemwanakomana wangu pa IUPUI zvave zvichishamisa. Iye Math uye Fizikiki akakosha uyo akawana yakawanda yekutarisisa kuburikidza nekugadzira hukama uye kushamwaridzana nevashandi. Vaporofesa vake vakamupikisa chaizvo uye vanoramba vachidaro. Vamuzivisa kune vamwe vadzidzi vari kugona muzvidzidzo zvavo zvakare.
Pa terevhizheni uye muhurukuro dzepamhepo, ini ndinoramba ndichinzwa dzidzo yemumwe ichidudzwa se ari kusarudza chinhu pane akawanda masimba emunhu uye ruzivo. Dzidzo chiratidzo chekuremera here? Ini ndinotenda dzidzo yepasekondari inopa zvinhu zvitatu zvakakosha kumunhu:
Iko kugona kupedzisa yakareba-chinangwa. Makore mana ekoreji chiitiko chinoshamisa uye chinopa vashandirwi humbowo hwekuti iwe unogona kubudirira pamwe nekupa iye akapedza kudzidza kuvimba mune zvake / kugona kwake.
Mukana we dzamisa ruzivo rwako uye ruzivo, uchitarisa mumusoro waunosarudza.
inishuwarenzi. Iyo koreji degree inopa yakawanda yeinishuwarenzi mukuwana yakakodzera basa nemubhadharo wakanaka.
Kunetsekana kwangu nedzidzo ndechekuti vazhinji vanotenda kuti dzidzo inoita kuti munhu ave 'akangwara' kana kuvapa simba rakawanda kudarika avo vasina kudzidza zvakanyanya. Kune mienzaniso isingaverengeke munhoroondo umo vatungamiriri vanofunga vakasekwa nevaya vakadzidza kwazvo… kudzamara varatidza zvakasiyana. Ivo vanobva vabatwa sevanosiiwa, kwete mutemo. Kumwe kutaura pamubvunzo kwakanyatso kuudza kuti:
… Zvinoita kunge kudzvinyirira, kupesana nekutaura, kuri kuita sekunge 'kunomanikidzwa' mune dzakawanda zviitiko. Kujekesa kusiyanisa, pamatanho ese, ndiyo 'inonakidza' chikamu chekoreji kosi. Kwandiri, kuratidzwa uku ndiko kunofanira kuve chiitiko chedzidzo. Ini ndinonzwa iyo PC vane / vari kudzikisira zvakanyanya kufunga kwemahara.
Mabhirionari uye Dzidzo
Mark Zuckerberg ndiye mudiki pane vese wekugadzira Forbes 'bhiridha runyorwa. Heinoi chinyorwa chinonakidza paZuckerberg:
Zuckerberg akaenda kuHarvard University uye akanyoreswa mukirasi ya2006. Aive nhengo yeAlpha Epsilon Pi fraternity. KuHarvard, Zuckerberg akaramba achigadzira mapurojekiti ake. Akagara naArie Hasit. Chirongwa chekutanga, Coursematch, chaibvumira vadzidzi kuti vaone zvinyorwa zvevamwe vadzidzi vakanyoreswa mumakirasi mamwe chete. Imwe purogiramu yakazotevera, Facemash.com, yaive yeHarvard-yakatarwa saiti chiyero saiti yakafanana ne Hot kana Kwete.
Shanduro yeyesaiti iyi yaive pamhepo kwemaawa mana Zuckerberg's Internet access isati yabviswa nevakuru vakuru. Dhipatimendi rebazi remakomputa rakaunza Zuckerberg pamberi peHarvard University Administrative Board, kwaakapomerwa mhosva yekutyora kuchengetedzeka kwemakomputa uye kutyora mitemo pane zvakavanzika zveInternet nepfuma yenjere.
Heano mudzidzi pane imwe yemayunivhesiti ane mukurumbira munyika akaratidzira hushingi tarenda remabhizimusi. Mhinduro kubva kuyunivhesiti? Vakaedza kumuvhara! Ndatenda kunaka kwaMako kuti akaenderera mberi nekuedza kwake uye haana kurega kumisikidzwa kumumisa.
Isu Tinodzidzisa "Sei" vs "Chii" Kufunga?
Deepak Chopra akabvunza mubvunzo paSeesmic nezve intuition. Ini handisi kuzopa mubvunzo wake kururamisira, Deepak Chopra ari kumberi (mumaonero angu akazvininipisa) evazivi vemazuva ano nevadzidzi vezvechitendero. Ane maonero akasarudzika pahupenyu, zvakasikwa, nekubatana kwedu.
Imwe mhinduro kuna Deepak yaive yekuti dzidzo yemunhu iyi yakamupa kugona kududzira nenzira kwayo nharaunda yake kuti amupe 'intuition'. Icho chirevo here? Kana kuti ndeyekurerekera kana kufungira zvisizvo here? Kana chizvarwa mushure mechizvarwa chakadzidziswa neiyo 'humbowo' hwakafanana uye nenzira imwechete yekududzira misiyano - tiri kudzidzisa vanhu here sei kuti funga? Kana kuti tiri kudzidzisa vanhu chii ku funga?
Ndiri kuonga mukana wangu wekuenda kukoreji uye hope dzangu ndedzekuti vese vana vangu vapedze koreji zvakare. Nekudaro, ini ndinonamata kuti ivo sezvavanowedzera kudzidza, dzidzo yevana vangu haivatungamirire kwairi zviito zvehubris. Dzidzo inodhura haireve kuti wakangwara, uye hazvireve kuti uchave wakapfuma. Kufungidzira, intuition, uye kutsunga kwakakosha zvakadaro sedzidzo huru.
William Buckley, achangofa, akamboti, "Ini zvirinani kuti nditongwe nemazita ekutanga 2000 mubhuku reBoston nharembozha pane nemadhoni eHarvard."
Tags: degreesdzidzomark zuckerbergchikwata chekudhindastartupsyunivhesitiwilliam buckley
Doug - KUSIMBISA post !!
Ini handisi mufiri weedu azvino dzidzo system. Ini ndinobvumirana zvizere nepfungwa yekuti chinongova chimwe chizvarwa chinopfuura kusaziva kune chinotevera.
Ini ndinotenda isu tinofanirwa kunge tichidzidzisa yedu iwe KUFUNGA. Kazhinji tinodzidziswa kungo rangarira nekudzokorora.
Hongu, asi Buckley akaenda kuYale.
Ha! Pfungwa huru, Clark!
Kunyangwe ini ndisingazive marongero anoita US uye nekuipa iyo dzidzo system, ini ndine imwe nzwisiso yeUK system. Inosveta ..
Kwete kuenda kunopinda mune zvematongerwo enyika, asi hurumende yedu iripo (http://www.labour.org.uk/education) vanoda 50% yevane makore gumi nemasere ekuberekwa kuti vawane degree kuyunivhesiti (http://en.wikipedia.org/wiki/Widening_participation)… Dambudziko neizvi ?? Iyo inoderedza kukosha kwechidimbu.
Sezvo dhigirii yakadaro iri kuva isingakoshi, uye inonyanya kukosha kuti uwane mhedzisiro inovimbika, kuitira kuti iwe ugone kudzidza PhD kana masters.
Chinangwa chedhigiri ndechekupa kugona kutora ruzivo kubva kune akawanda masosi, uye kuchinjisa icho mukunzwisisa. Izvo hazvisi izvo zvaunodzidza, asi kuti unozviita sei.
Iyo ipfungwa yakatanhamara. Kana munhu wese ari munyika akawana dhigirii rake - saka dhigirii inova iyo shoma shoma zvakare. Zvichida mabasa asingade degree anozoda imwe kana munhu wese aine imwe.
Ukatarisa zvikonzero zvako kuti dzidzo yepamusoro yakakosha, uchaona kuti hapana kana chimwe chazvo chinosanganisira kudzidza kufunga.
Yepedyo ndeye # 2, iyo inokupa iyo mbishi zvinhu zvekufunga nazvo. Mhinduro kumubvunzo waDeepak Chopra iyo iwe yawataura yaive, ndinofunga, kugadzirisa iyi poindi. Intuition inoda mbishi zvinhu zvekushandira. Kunyanya iwe uchiziva, zvakanyanya kuitika kuti zviitike.
Koreji inzira yekupfuudza pazvizvarwa kusaziva kwazvino? Yakatarisa zvisina kunaka, hongu. Yakatarisa pane zvakanaka, ndiyo nzira yekupfuudza padanho rezvino reruzivo. Kana iwe uine rombo rakanaka, iwe unowana vadzidzisi uye vanopa mazano vanokukurudzira iwe kuti upfuure iyo iripo nhanho yeruzivo.
Kune vanhu vazhinji, zvakadaro, koreji chikoro chinokudzwa chekutengeserana, nzira yekuita kubatana kunoenderera mberi nebasa ravo, uye imba yepakati kubva paudiki kusvika pakukura.
Ini handina kuzviisa pasi sechikonzero nekuti ini handifungi kuti ndizvo zvinogoneka nezvazvino post-sekondari dzidzo. Ini zvechokwadi handina rutendo kana ndichihaya munhu akapedza kudzidza kukoreji kupfuura ini zvandinohaya munhu akapedza chikoro chesekondari kuti vane hunyanzvi hwekugadzira hunodiwa kuti vabudirire munzvimbo yanhasi yebasa.
Ndakambotaura kare kuti ndinoda vana vangu vese kuti vawane mabachelors avo (at least); zvisinei, handitendi kuti kuwana diploma kuri kuzovavimbisa kubudirira. Ini ndinongotenda kuti ichavavimbisa kubva pakutadza.
Wati izwi remashiripiti: kugona
Kushandisa fungidziro / zvisikwa nemazvo ndiyo nzira yekudzidza nekugadzira uye izvo hazvitore dzidzo yechipiri. Asi ini ndinofunga kupfuura zvese, isu tinofanirwa kudzidza kufuratira zvakashata manzwiro anovhara nzira yekufunga kwakakodzera iyo inovharira iyo nzira kune chaiyo / yakanaka chiito.
Ini ndasvika pakutenda kuti chinhu chakakosha kwazvo icho munhu chaanogona kubuda kukoreji chimwe chinhu chisina kuiswa. Ini ndinofunga chikonzero chakanakisa chekuenda kukoreji kukwikwidza uye kubatana pamwe nevezera, Uye zvirinani chikoro icho chinowedzera nani vezera semumwe anovavarira kusvika padanho rezera ravo. Kunyanya apo avo vezera ravo vanogona kubva pazviitiko zvakasiyana uye / kana tsika dzakasiyana neni.
Ini ndakawana zvakawanda kwazvo kubva mukufunda nevamwe vadzidzi uye kubatanidzwa mune zvekunze zviitiko navo navo kupfuura chero chimwe chikamu chekoreji.
Nehurombo pane chikamu chakakura chevagari vedu (~ 42%?) Inotya makoreji, kunyanya iwo makoreji ari nani, nekuti vanomanikidza vadzidzi kubvunza kwavo kwavo kufungidzira uye fungidziro dzakafungidzirwa. Vanhu vakawandisa kwazvo vangangoda kungotenda zvavanoda kutenda uye nekudaro vanozvikomberedza nevamwe vanogonesa maitiro avo ezvemamiriro ezvinhu sezvavanotadzisa maonero avo epasirese. Mushure mezvose, nzira yakanakisa yekutenda izvo munhu anoda kutenda ndeyekuona kuti hapana humbowo hunopesana.
Kana isu tichizofambira mberi senyika, senyika, senge rudzi rwevanhu, vanhu vari kuzofanirwa kupfuura ichi chinodikanwa chirwere kuti vadzivise chero chinhu chinopesana nemaonero avo akasimba-akabata epasi rose. Nehurombo, zvichibva pane zvandakaona zvichiitika mumakore gumi apfuura, ini handina tariro yakawanda yekuti vanhu vazhinji vanozoisa parutivi mazano avo ekurapa kuti izvo zviitike chaizvo.
Mike - ndiyo yakanaka pfungwa. Ini ndinobva kumhuri dzakasiyana uye takagara pasi rese - asi kune vazhinji, ino inguva yekutanga kuti vechidiki vayananiswe nedzimwe tsika dzinopfuura nharaunda yavo.
Ini zvechokwadi handina tariro yakawanda kana. Ini ndinofunga vanhu vanovhota ne 'mhepo' uye havachaisa chero kufunga mukati mayo zvakare. Iwo mapato maviri akagona kubata mamirioni.
Ini handifunge mapato ayo zvakanyanya sevanhu. Kunyanya vanhu vanoungana mumapoka uye zvakakosha zvakadai se501 (c) s uye "vanofunga matangi." Hazvife zvakachinja kudzamara vanhu vamuka uye vaziva kuti varikutambirwa mapundu.
Chikamu chekutaura kwangu chaive chekuti vanhu vane dzidziso dzakadzika midzi zvekuti vanokumbira kushandiswa. Haisi mhosho dzebato ivo vanonamira kupfungwa dzevanhu nekuvapokana ne "vamwe" kuti vawane simba ravo. Mapato achangobva kudzidza maitiro ekuzadzisa zvinangwa zvavo, kuti vasarudzwe.
“Vakasununguka” uye “vanochengetedza” ndiwo mamwe emazita aripo ekuparadzanisa apo mapoka anonyengera vanhu nekuparidza pfungwa uye nekuratidzira rimwe rakarongeka uye rinozivikanwa zviri nyore rimwe boka iro kazhinji risipo. Vanhu ava vanoshandisa kutya uye kupatsanurwa nechitendero, dzinza, bonde, kuda pabonde, tsika nemagariro, jogirafi, nyika.
Pandakanga ndiri mudiki taive ne "Hondo inotonhorera" asi mushure meizvozvo zvikaenda ini ndaifunga kuti taive new world order iyo yaigona kushanda pakutengeserana uye kugara murunyararo. Mwari wangu ndaive ndisina.
Ndafunga kuti unonakidzwa nekuona mumwezve ane maonero aya…
"… Zvinosuwisa tsika dzenyika dzinoendeswa sehosha yekugara nhaka kubva kuchizvarwa kusvika kuchizvarwa kuburikidza nekushanda kwehurongwa hwekudzidzisa."
Ingo ndawana izvi, zvakare kutonhorera!
Jul 6, 2009 na4: 38 PM
Tsvaga ichi chinonakidza chinyorwa: Kukanganisa kweiyo Elite Dzidzo.